Ukuba awuyazi indlela yokujamelana neminyaka yobudala bombuso ebusweni bakho, ngoko ke sinokukunika isiluleko esilungileyo sabantu. Ngoku kunzima ukufumana ikhambi elifanelekileyo lokulwa ne-wrinkle elisebenza ngokwenene. Kodwa abantu abaninzi baqala ukulibala ukuba iindlela ezidumileyo, ngoku zingabalulekanga kwaye zingabonakali, zingabonakalisa luncedo kakhulu.
Ngoko yintoni enokuthi ithathwa njengomntu osebenzayo wokulungisa umonakalo? Makhe sibone. I-Quinques izokukunceda ukulwa imibimbi. Iinqununu ze-quince zingenziwa nge-massage eya kuba nefuthe eluncedo kwesikhumba sakho. Kwakhona, i-aloe ibonakele kakhulu kule "ntsimi". Ufuna nje ukwenza ubukhulu beqabunga lamagqabantshintshi, udibanise amanzi uze ushiye ubunzima. Emva koko kufuneka uyililise imizuzu embalwa, gxobhoza kwi-gauze kwaye usebenzise njenge-lotion njengendlela yokukhusela.
Ukuba unamaqabunga phantsi kweenkophe, amazambane anokuba yindlela efanelekileyo yokuyithatha. Kumele kubiliswe kwi-peel, ugayi kwaye ungeze ukhilimu omuncu. Emva koko, ngoxa kusefudumala ukubeka kwesikhumba. Emva kwemizuzu engama-15 ukuya kwe-20, susela ngamanzi abandayo. Leli cilisi lendoda ayinayo ingxaki kunye neenkcukacha zokudala.
Omnye umthombo onobuncedo kunye osebenzayo yi-lemon. Kumele inqunywe kwaye ithulule iglasi ye-vodka. Kufuneka ifakwe kwiintsuku ezingama-9-10. Ekupheleni kwexesha, ukumanyelwa kufuneka kuzaliswe ngekotoni egxininiswe ngokufakelwa kwamanzi kwaye uyibeke ebusweni bakho. Emva kwemizuzu engama-20, susa imaski, kodwa ungahlambeli ubuso bakho. Nangona unesikhumba somnxeba, ukukhushulwa okugqithiseleyo kunciphisa ama-pores kwaye idibanisa imibimbi.
Ungasebenzisa ikhukhamba endaweni apho kubonakala khona imibimbi. I-pre-cucumber kufuneka ifakwe kunye nokufudumala.
Iindlela ezilungileyo ziqwalaselwa ezinye zezityalo, kukho iindlela ezininzi zokupheka ezisebenzisa izityalo eziye zabanceda abakhulu-makhulu bakhuphe imibimbi.
Umzekelo, unokusebenzisa i-chamomile. Kubalulekile ukuphuza isipuni se-inflorescences ngeiglasi ezimbini zamanzi abilayo kwaye ubeke umlilo omncinane malunga nemizuzu elishumi. Kule mhlu kufuneka udibanise ithawula, uyikhuphe ngaphandle, uyifake kwaye uyibeke ebusweni bakho. Ukuba ithawula ipholile, phinda inkqubo. Emva kokugqiba ubuso bonke, hlamba ngamanzi abandayo kunye negrisi nge-cream engqinileyo.
Ukunyuka kwe-Sage kunceda kunye nemibimbi. Kufuneka bahlambe ubuso babo nentamo. Ukuxuthwa kungenziwa ngokuthululela amaqabunga atywe ngamanzi abilayo, kwaye uzincipha emva koko.
Unokusebenzisa enye indlela, ukudala i-broth kunye ne-infusions kwiimveliso ezininzi ngokukhawuleza.
I-mask eyenziwe ngomxube wee-strawberries kunye nobusi iza kuba luncedo kwikhumba elomileyo nelinen. Le maski iyasebenza kakhulu, iya kunceda ngexesha elincinci lokubeka umntu ngendlela efanelekileyo kunye nemibhobho elula.
Enye into ezithakazelisayo ezisixhenxe ukukhusela ukubonakala kwemibimbi. Amaqabunga eSt John's wort angathululelwa ngeoli yelanga kunye nokushiya ukunika iiveki ezimbalwa endaweni ebandayo kunye emnyama, emva koko ingahlulwa.
Unokongeza i-yolk yepuni ye-juice, ifakwe kwi-zucchini. Mask ukubeka ebusweni, ubambe imizuzu engama-20, ngoko ngobumnene kunye ne-cotton swab uhlambe, okokuqala kufuneka ufudumeze amanzi, kwaye emva koko kubanda.
Kwakhona ukukhusela, ungasebenzisa imaski. I-Grate iinqwelo ezincinane ezitsha kwi-grater, engeza i-yolk, i-spoonful ye-oyile yemifuno kunye namaconsi amancinci. Faka isicelo ngokufanelekileyo ebusweni kwaye uhlale malunga nemizuzu engama-25 ukuya ku-30, uze uhlanza ngamanzi afudumele.
Kukho imaski enhle kakhulu kwesikhumba esikhulileyo. Ngomxube, uya kufuneka ezi zilandelayo: i-aloe juice, izithelo ze-rowan, i-wort yase-St. John kunye nettletle. I-tablespoon yokuqokelela ngamanzi abilayo ukugawula kwi-gruel kwaye emva kokongeza ubusi, iqanda kunye ne-aloe. Faka yonke ingxube ebusweni bakho kwaye ugcine loo mizuzu engama-25, uze uhlanza ngamanzi abandayo.
Esinye isixhobo esihle kakhulu siqokelela izityalo ezahlukeneyo. Nantsi enye iresiphi efanelekileyo. Thatha amaqabunga owomileyo we-eucalyptus, i-wisdom, i-mint, i-chamomile kunye ne-dandelion, ngaphambi kokuchotha kunye nokutshisa kwi-skillet. Yenza umxube ofudumeleyo kwiingxowa ze-gauze. Ngako oko, zibeke ebusweni obucocekileyo, uze ungabasusi kude zipholile. Le nkqubo inokuphindwa kabini.
Unokudibanisa i-thyme kunye ne-mallow kunye ne-chamomile izimbali kunye nokudibanisa kwe-500 ml yamanzi. Yonke le mxube kufuneka ifakwe emathunjini kwaye iguqulwe phezu kwesitya kunye nomxube ngendlela yokuba isitya sisitshabalalise ubuso nentamo. Kucetyiswa ukwenza oku phambi kokusebenzisa nayiphi na imaski.
Nazi ezinye iingcebiso malunga nemibimbi. Thatha imvubelo uze uyigayile, ubandakanye ubisi olushushu olusisigxina okanye i-oyile yemifino eyomileyo, okanye i-3% ye-hydrogen peroxide isisombululo se-oily skin. Imaski kufuneka igcinwe imizuzu engama-15-20, uze uhlambe ngamanzi afudumeleyo. Ngokufanelekileyo, ikhosi kufuneka ibe nama-masks angama-20.
Ezi zokupheka ezilula, kodwa ezinempumelelo ziyakunceda unqobe amahlumela anxulumene neminyaka yolusu uze ulahle imibimbi xa kungenjalo ngonaphakade. Siyathemba ukuba inqaku lethu elincomekayo nelinomdla liya kuba yikhompyutha yakho ekujonganeni nemibhikano ehlobene neminyaka.
Ikhaya leMaski yolusu oludibeneyo
Iimaski zobuso ezivela kwiintlobo zekhaya
Indlela yokunciphisa ukukhathala kwamehlo, ukuzisebenzisa ukukhupha ukukhathala kwamehlo
Indlela yokukrazula ifungus kwindlu
Iresiphi yengulube kwi-sauce emnandi neyomuncu
I-Soufflé kunye namazambane kunye ne-sausages
Ukupheka kwe-Lenten kunye neefoto zilula kwaye ziyancasa zonke iintsuku zeLente. I-Lenten pies, i-cutlets, i-borsch, isobho, iifatata, iikhosi ze sibini zokupheka okumnandi
I-sweet potato ne-sauce
Ukuzivocavoca kwabasetyhini: i-yoga ye-Fitness